Ifektri Yemifino Yemifino - Abenzi bamaprotheni baseChina, abahlinzeki
Ipea protein powder luhlobo lwamaprotheni akhishwe kupea ngobuchwepheshe obuthuthukile. Ipea amaprotheni aqukethe wonke ama-amino acid abalulekile emzimbeni womuntu futhi angawo wonke amaprotheni entengo. Amaprotheni ayisisekelo sempilo, ngumzimba wezinto ezintathu ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, i-pea protein powder ingukudla okungeyona i-GMO, akukho ma-allergen we-soy, nokuphepha okuphezulu. Izinga lokumunca i-pea protein powder lingaphezu kwama-95%, elixazulula inkinga yokuthi umzimba unzima ukumunca amaprotheni ekudleni futhi wehlise umthwalo esiswini. Lo mkhiqizo uyi-powder eyimpunga elula, encibilikayo emanzini, futhi iyiprotheni ehlukile ethembisayo kunazo zonke kubantu be-allergen emakethe.
Amaphrotheni we-Soy aqoshiwe
Iphrotheyini yethu yesoya ekhiqizwayo ikhiqizwa ngemishini ye-extrusion engeniswe ivela e-US ngamabhontshisi kabhontshisi we-soy wekhwalithi ephezulu yasekhaya kanye namaprotheni we-soy njengezinto zokusetshenziswa ezinkulu. Umkhiqizo ubonakala ngokuthungwa kwenyama eluhlaza. Ithatha ukuthungwa kwemicu futhi iba nokuqina okuhle, ukuqina kanye nokuhlafuna kwenyama ngemuva kokubuyiselwa emzimbeni. Ingacutshungulwa ibe yimicu noma izingcezu nge-beater noma nge-chopper ngemuva kokunisela. I-textured soy protein nayo ingacutshungulwa ibe izingcezu, imichilo noma ama-cubes, akhombisa ukuthungwa okune-fibrous kanye nokuhlafuna kwenyama.
Amaphrotheni weSoybean Ahlanganisiwe
Oamaprotheni we-soy aqoshiwe akhiqizwa ngemishini ye-extrusion engeniswe ivela e-US enezinga eliphakeme lasekhaya lobhontshisi okungewona we-transgenic namaprotheni we-soy njengezinto eziyinhloko zokusetshenziswa. Umkhiqizo ubonakala ngokuthungwa kwenyama eluhlaza. Minat uthatha ukuthungwa kwemicu futhi aqhubeke nokuqina okuhle, ukuqina kanye nokuhlafuna kwenyama ngemuva kokubuyiselwa emzimbeni. Ingacutshungulwa ibe yimicu noma izingcezu nge-beater noma nge-chopper ngemuva kokunisela. I-textured soy protein nayo ingacutshungulwa ibe izingcezu, imichilo noma ama-cubes, akhombisa ukuthungwa okune-fibrous kanye nokuhlafuna kwenyama.
Amaphakethe Esoso Soy, Izingane Amabhisikidi, Ukudla Amakinati Anosawoti, Induku entsha ye-Bean Curd, Ikhukhi leLadyfinger, I-Hawthorn Strip,